युबती हरुले ब्लाउजभित्र पैसा घुसाएर किन राख्छन् ? तपाईलाई थाहा छ ? - Nawalpur Dainik
युबती हरुले ब्लाउजभित्र पैसा घुसाएर किन राख्छन् ? तपाईलाई थाहा छ ?
लायतकी पूर्वप्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचरले भनेकी थिइन, म नारी स्वतन्त्रता र आफ्ना लागि आफै नियम बनाउने विचारकी पक्षपाती हुँ । मलाई चाहिएका समान सँगसँगै बोकेर राख्न ठूलो हण्ड ब्याग बोक्ने गरेकी छु । बेलायती पूर्वप्रधानमन्त्री थ्याचरका लागि ह्याण्ड ब्याग बोक्ने कारण यहि भएपनि संसारभरीका महिलाका लागि भने नहुन पनि सक्छ । उनीहरुलाई लागि ह्याण्ड ब्याग बोक्नु झञ्झटिलो पनि हुने गरेको छ ।
महिलासँग हुने ह्याण्ड ब्याग झञ्झटिलो भनौ या सुविधा यसको प्रमुख कारण उनीहरुले पहिरने लुगामा प्रयाः गोजी हुदैन् । महिलाका लुगामा किन गोजी हुदैन् ? महिलाका धेरै जसो लुगामा गोजी हुदैन, केहीमा भएपनि नाम मात्रैको हुन्छ । केही खुद्रा पैसा बाहेक यसमा अरु केही अटाउदैन् । पश्चिमा देशरुमा सानो वा देखाउने किसिमको गोजी भएपनि पाइन्ट र ट्राउजर मात्रै हुन्छ । गोजी नभएकै कारण मोबाइल, सानो पर्स र साचो लगायतका स–साना सामान राख्न पनि महिलालाई गाह्रो हुने गरेको छ । जसले गर्दा केही महिलाले ब्लाउजभित्र घुसाएर राख्ने गरेका छन् । यो देख्दा र सुन्दा हसिमजाक जस्तो लागेपनि महिलालाई भने साह्रै अप्ठ्यारो हुने गरेको छ ।
यसलाई पनि पुरुषवादी मानसिकता भन्ने गरिएको छ । सन् १८४० देखि फेसन डिजाइनरहरुले महिलाका लागि ठूलो घाटी, पातलो कम्मर, किनारमा घेरदार लगाउने चलन शुरु भयो । यो विस्तारै महिलाको पोशाककै रुपमा हेर्न थालियो । त्यसपछि महिलाका कपडालाई स्त, न, पेट र हि, प्सलाई देखाउने गरी डिजाइन गर्न थालियो । क्रियटिभ फेसन डिजाइनर क्यामिला ओल्सन यसलाई फेसन उद्योगभित्रको लै ङ्गिक वि भेद भन्छिन् । उनको विचारमा मध्यमवर्गीयको फेसन पुरुषप्रधान छ । महिलाका लागि डिजाइन गरिएका कपडा पातला, शरीरमा टिपिक्क लाग्ने किसिमले बनाउने गरिएको छ । उनी यसलाई भिक्टोरियन समयको मानसिकता भन्न रुचाउँछिन्, जति बेला महिलालाई सुन्दरताका रुपमा मात्रै हेरिन्थ्यो ।
कपडामा गोजी नहुँदा महिलाहरु सधै ह्याण्ड ब्याग बोक्ने गरेको पाइन्छ । ह्याण्ड ब्यागको पनि छुट्टै डिजाइन, स्वरुप हुनथाल्यो र यो अर्को सामान बन्न पुग्यो । यसले पनि फेसन डिजाइनरहरुले महिलाका पोशाकमा गोजी हुनुपर्छ भन्ने सोच्न चाहेनन् । महिलाका लुगामा गोजी हुने वितिक्कै ह्याण्ड ब्यागको आवश्यकता हुदैन कि भन्ने फेसन डिजाइनरहरुमा प¥यो । केही वर्षयता यूरोपियन देशका महिलाहरु आफ्नो पोशाकमा गोजी बनाउनुपर्ने विचार स्थापित गर्न ‘गिभ अस पोकेट’ अभियान चलाइरहेका छन् । यससँगै संसारभरी हुने नारीवादको वहसमा गोजीको मुद्दा पनि उठ्ने गरेको छ । यति हुँदा हुँदै पनि फेसन जगतले अझै पनि यो मुद्दामा ध्यान दिन खोजेको देखिदैन ।
Posted in जीवनशैली, विचार/ब्लग
Prevयि हुन सबै भन्दा राम्रो नाच्ने १० नेपाली चलचित्र नायिकाहरू…..(हेर्नुहोस् पुरा बिवरण)
Nextमाघ २७ गते मंगलबार, यस्तो छ तपाईको राशिफल